1. Buy music on Google Play music
Waxaa macquul ah in uu kaydiyo ilaa 50 000 oo heeso ku saabsan Google Play account Music Waxaad. Awoodda Tani waa lacag la'aan ah laga heli karaa. Runtii waa wax lagu kaydin cajiib ah in aad isticmaali karto si aad ugu cadcad heeso. Iyadoo in ka badan 22 milyan oo heeso dukaanka, waxaad fursad u haysataa in ay dhagaystaan ​​heesaha lacag la'aan ah ama ka iibsan karaa qiimaha laga bilaabo $ 0.99.
Si aad u isticmaasho oo ka soo iibsadaan Google Play Music, waa in aad u leedahay in account Google ah. Ka dib markii aad qortey oo aad go'aansatay in ay soo iibsato hees, guji kaliya qiimaha ku qoran song in. Waxaad la dib-u-faray doontaa inaad doorato nooc ka mid ah lacag bixinta ama waxaad isticmaali kartaa furaha promo ah haddii aad leedahay mid ka mid ah.
Waxaad fursadaha kala duwan si ay u iibsadaan, laakiin waxay ku xiran tahay inta badan ee gobolkaaga. Noocyada lacagaha ugu badan ee la isticmaalo waa ay Credit Card ama Debit Card. Haddii aad tahay qof ka hore, hadda in aad soo buuxin kartaa foomka u Salada Google. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in ay galaan magacaaga oo buuxa, cinwaanka ay ka mid yihiin xeerka boostada iyo magaalada; Waa in aad soo gashid aad credit card ama debit tirada, taariikhda dhicista, iyo tiro ammaanka ka dib ee credit card aad. Haddii qaan ah wax looga qabto waxaa la mid ah waa in aad qoraal ah sida aqoonsiga Google, oo kaliya u baahan tahay inaad saxdaa sanduuqa loogu talagalay la mid ah. Tallaabada Final waa in guji mooyee, oo aad diyaar u ogaadaan si ay u iibsadaan heesta.
2 Buy music on Amazon MP3
On Amazon MP3 dukaan aad ka iibsan kartaa music digital qiimo aad u hooseeya. Waxaad u baahan tahay inaad leedahay xisaabta Amazon si ay u soo iibsadaan songs halkan. Sidoo kale, waxaad ka iibsan kartaa la credit card, kaarka debit ah, iyo kaarka hadiyadda Amazon, Amazon.com Abaalmarinta Visa Card, Amazon.com Store Card, iyo Amazon.com Corporate Credit Line, la Points.
Haddii aad tahay user a hore oo aad rabtid in aad ka iibsan hees, oo dhan waxaad u baahan tahay inaad samayso waa inaad magacaaga qor, cinwaanka, cinwaanka maraakiibta, iyo faahfaahin ku saabsan habka lacag bixinta. Marka aad qoraal ah dhammaan faahfaahinta iyo xisaabta waa in heer wanaagsan ah, waxa aad awoodi kartaa in ay iibsadaan heeso. Haddii aad u cusboonaynta xisaabtaada amazon bixiyaan $24.99 muddo sannad ah, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u dajiyaan ilaa 250 000 heeso aad Music Library.
3. Google Play music VS Amazon MP3
Google Play Music leedahay wax badan oo heeso xor ah oo aad dhegaysan kartaa oo gabayaa ahaa ka hor si ay u iibsadaan album oo dhan, tusaale ahaan. Macaamiisha ayaa ka yimid dhulka gaar ah oo adduunka ah iyo Google ayaa ka liidato ee dalalka qaar. Laakiin tani waa diyaar u ah Amazon, sidoo kale. Qaybaha of music waxaa laga heli karaa labada dukaamada.
Google Play Music la bilaabay 2011 oo waxaad bixisaa hadda in 2015 in ka badan 30 000 000 heeso. Ilaa hadda, waxaa lagu heli karaa 58 dal oo kale Australia, Austria, Belarus, Belgium, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador , El Salvador, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Talyaaniga, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Makedoniya, Malta, Mexico, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Panama , Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, Venezuela. Music Play Google ayaa laga yaabaa in habka kaliya ee si ay u iibsadaan muusikada ee Android users oo aan heli Lugood. Oo tiradoodii ee 2015 waxay muujinaysaa 1 000 000 000 000 oo ah dadka isticmaala android.
Kordhinta kaydinta ilaa 50 000 oo heeso ka mid ah user, waxa laga yaabaa inay ahayd feature ugu wanaagsan ee la casriyeeyay ee xisaabaadka aad u badan Google.
waafaqsan loo maqli karo ku eg tahay mid qalab, loo maqli aan waafaqsan xadidan ilaa 10 aaladaha iyo heeso laba jeer la soo bixi karaa internetka.
Amazon MP3 Store ayaa la bilaabay on September 2007 oo ilaa iyo hadda ee 2015, waxaa jira in ka badan 29 000 000 heeso. Waxaa laga helo dalalka sida Mareykanka, United Kingdom, Germany, France, Austria, Switzerland, Japan, Italy, Spain iyo. Amazon MP3 ee buugga waa la heli karo bogga internetka ee amazon.com baadhi magaca artist ama horyaalka ah. Si aad u download music iibsaday, Amazon.com bixiyaa mid ka mid ah Amazon Cloud Player ama Amazon MP3 Downloader. Amazon MP3 dukaanka waxaa loo isticmaalaa badan isticmaala macruufka, laakiin sidoo kale version android waxa loogu adeegsaday iibsashada muusikada. Xaddadka ka yimid dalal Mp3 Amazon ee isticmaala android waa la heli karaa. Codsiga waxaa u ogolaanaya dadka isticmaala telefoonka mobile inaad kala soo baxdo kuwan raadkaygay oo albums shaqsi marka ay isticmaalaan shabakad Wi-Fi.
Mid ka mid ah user dajiyaan karaa ilaa 250 000 gabayo akoonkiisa. The Diiwaanka heesaha waa mid cajiib ah oo waxaa jira noocyo badan sida Alternative, Blues, Vocalists, Music Carruurta, Christian, Qadiimiga ah, Classic Rock, Comedy, Country, Qoob ka ciyaarka iyo Electronic, Folk, Injiil, Rock iyo adag Rock, Holiday Music, Jazz, Latin Music, New Age, Opera & Vocal, Pop, R & B, Rap iyo Hip-hop.
Tirada dal oo ay waa la heli karaa waa mid xadidan oo ay u badan tahay ee inta badan isticmaala door bidaan siyaabo kale si ay u iibsadaan muusikada. In ka badan in, users badan ayaa sheegay in heesaha on Google Play Music raqiisan yihiin kuwa ka Amazon MP3 yihiin.
Top 30 ciyaaryahan MKV for Windows / Mac / macruufka / Android
Top 20 ciyaaryahan warbaahinta u eegista classic iyo waxyaabaha kale ee
Total u eegidda Video Converter- oo lagu bedelan karo
Aabbaha Best waxaad dhahdaa Songs List 2012
> Resource > Top List > ugu wanaagsan 2 Music Dukaamada si aad u iibsadaan muusikada ee Android